एमाले-माओवादीले बनायो ९ जनाको ‘हाइकमाण्ड’ को-को परे ? नाम र जिम्मेवारी सहित « Naya Bato
एमाले-माओवादीले बनायो ९ जनाको ‘हाइकमाण्ड’ को-को परे ? नाम र जिम्मेवारी सहित
एकीकृत पार्टीको स्थायी कमिटी ४३ सदस्यीय हुनेछ, जसमा एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ नेता हुनेछन् । यस्तै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । कमिटीमा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० नेता राख्ने सहमति भएको छ ।